Madaxweynaha oo markii u horeysay ka qeyb galaya munaasabad ka socota mid ka mid ah Hotelada Muqdisho – idalenews.com
Madaxda ugu sareysa dowladda ayaa haatan ka qeyb galaya munaasabad lagu soo dhoweynayo aqoonsiga Mareykanka uu siiyay dowladda Soomaaliya, kaasoo iminka ka socota Hotelka City Palace ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tan iyo bishii September markii loo doortay xilka Madaxweynaha aan ka soo muuqan fagaaraha, isagoo aan ka qeyb gelin munaasabadaha lagu taageero dowladda ee Muqdisho ka dhacayay.
Wararka ayaa sheegaya in Munaasabadan oo uu soo qaban qaabiyay Maamulka Gobolka Banaadir ay ka qeyb galayaan maamulada degmooyinka, Xildhibaano, qeybaha bulshada rayidka iyo dad kale.
Madaxweynaha oo uu wehliyo Ra’iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa ku sugan Hotelka City palace, iyadoo amaanka uu yahay mid aad loo adkeeyay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa booqashadii uu ku tagay Mareykanka kula kulmay Madaxweyne Obama iyo Xoghayaha Arrimaha dibada Hillary Clinton, iyadoo Mareykanka uu aqoonsi rasmi uu siiyay dowladda Soomaaliya.
Banaan baxyo lagu soo dhoweynayay aqoonsiga Mareykanka ayaa dhowaan ka kala dhacay magaalada Muqdisho, Jowhar iyo meelo kale, iyadoo aqoonsiga Mareykanka ay bilow u noqoneyso xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka.
Ururka IGAD oo Dowladda ka dalbaday dadajinta maamulka loo sameynayo Jubooyinka